Transparency sy ny AVG: toherina ny fanoneram-bola ny mpanao trafika andramena | NewsMada
Transparency sy ny AVG: toherina ny fanoneram-bola ny mpanao trafika andramena
Taitra ny fikambanana iraisam-pirenena Transparency international sy ny Alliance Voahary Gasy, fa mikasa hanonitra vola ireo mpandraharaha manana tahiry andramena ny fanjakana. Manaitra ny Banky iraisam-pirenena hijery akaiky ity raharaha ity izy ireo.
Namoaka fanambarana iombonana ny fikambanana Transparensy international sy ny Alliance Voahary Gasy (AVG), ny 28 septambra teo mikasika ny fivoriana hatao any Sotchi Rosia, rahampitso, 2 oktobra, hanoloran’ny fanjakana malagasy ny soson-keviny sy ny drafitrasany hivarotana ny tahiry andramena giazan’ny fanjakana. Voalaza ao fa honerana vola ireo mpandraharaha nanao fanambarana tahiry andramena ny taona 2011. Lazaina ao anatin’ilay drafitrasa koa fa hamidy ireo andramena giazan’ny fanjakana, harotsaka ao anaty kitapom-bolam-panjakana ny 25%, ho an’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (faritany, faritra, kaominina), ny 25% ary hanaovana asa fanarenana ny ala ny 50%.
Nitsotra ny filohan’ny AVG, Razakamanarina Ndranto, fa “toherinay hatramin’ny farany izany hanonerana vola ny mpanglatra andramena izany. Tsy ekenay koa io fitsinjarana ny vola io, indrindra, endrika fanohizana ny fandripahana ny ala izao paikadin’ny fanjakana izao. Angatahanay ny Banky iraisam-pirenena hijery akaiky ity raharaha ity, hifampidinihana ny zava-misy”.
Zaraina amin’ny mpanao asa tanana
Tsiahivina fa notsipahan’ny fikambanana iraisam-pirenena mitantana ny varotra hazo sy ny zavamaniry tandindomin-doza (Cites) foana ny soso-kevitry ny fanjakana malagasy hatramin’izay, mikasika ny vahaolana amin’ny andramena.
Nohamafisin’ny filohan’ny AVG, fa tsy vanim-potoana sahaza ny hikitihina ny andramena izao, satria mafana ny lafiny politika sady ao anatin’ny fifidianana. Anisan’ny vahaolana narosony hatramin’izay ny hizarana ireo tahiry andramena amin’ny mpanao asa tanana malagasy.